रतुवामाई वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिद्धारा बिरुवा वितरण
नेपालदृष्टि । रतुवामाई वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिद्धारा रतुवामाई नगरपालिका,मोरंगका किसानहरुलाई विरुवा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सामुहिक कृषी र युवा स्वरोजगारिताको लक्ष्यमा केन्द्रित संस्थाले नगरवासीविच विभिन्न प्रजातीका विरुवा वितरण गरेको छ।
स्वत स्फुर्त युवा द्वारा युवाकै निम्ती खोलिएको यस संस्था पछिल्लो समय नगरवासीविच परिचित बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको आक्रोशलेमात्र समाज परिवर्तन नभएर समाजमा सामाजिक बन्दै जाने यस्ता कार्यक्रमर ले सहज हने देखिएको छ। नगरभित्र बिभिन्न स्थानमा ठुलो परिणाममा सामुहिक धान रोपाई सकेसंगै युवाहरु हरियाली नगरको लागी विरुवा वितरणमा देखिएका हुन।
मंगलवारे सामुदायिक बनको समन्वयमा उक्त बनले हुर्काएका ९ प्रजातिका बिरुवा १५ सयको संख्यामा निस्शुल्क वितरण गरिएको हो।११३ किशान बिच मसला,टिक,इपिल,रुदाक्षे,खमारी,कपुर,बकाइनो,अर्जुना,सतिसाल पर किशान बडिमा १५ का दरले बितरण गरिएको सदस्य प्रेम राईले जानकारी दिनुभयो।
११३ किसानको परिचय पत्रको फोटोकपी,फोन न लिएर कम्तिमा २ पटक प्रतक्ष निगरानी गरिने लक्ष्य रहेको छ।विरुवाको संरक्षण,तिनमा आइपर्ने समस्या र निराकरण समेतलाई ख्याल गरि वितरण गरिएको यस्को प्रभावलाई अहिले नभएर अर्को बर्ष समिक्षा गरिने यो अन्त्य नभएर किसानसंगको सहकार्यको शुरुवात भएको अध्यक्ष ठगेन्द्र प्र न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो। निशुल्क विरुवा वितरण गर्नु,क्षणिक लोकप्रियता बटुल्नु र किशानहरुमा बिरुवा प्रती आकर्शण बड्नु फरक कुरा हुन । आगामी दिनमा निरीक्षण र अनुगमन गरिरहे अभियान सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा यो संस्थाले पनि पुरानै प्रचलन अनुशरण गरेको ठान्न सकिन्छ।
‘यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? ’ पशुपति शमशेर राणा
किन भयो कठिन न्युयोर्कमा कवि सम्मेलन ?
डिआइजी दुर्घटनाका चालक थुनामा